भाइरल ज्वरो भनेको के हो ? - Chandragiri News
Home मुख्य भाइरल ज्वरो भनेको के हो ?
भाइरल ज्वरो भनेको के हो ?
२०७४, २४ पुष सोमबार ०९:३०
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा इन्फ्लुएञ्जा रोगलाई भाइरल ज्वरो, रुघामर्घी वा रुढी वा फ्लू भनेर पनि चिनिन्छ । तर कहिलेकाहीं यसले घरपरिवारका धेरै सदस्यलाई, विद्यालय वा छात्रावासका धेरै विद्यार्थीलाई तथा अस्पताल, कारागार, ब्यारेकजस्ता एकत्रित भएर बस्ने मानिसलाई एकसाथ प्रभावित पार्दछ । जसलाई हामी महामारी भन्दछौं ।
Previous articleपोल र तारको धराप !
Next articleपुनर्निर्माणको मौका छोपी निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि